Maguta Spain - Nhau dzekufambisa | Nhau dzekufambisa (Peji 2)
Mahombekombe akanaka eHuelva
Tichataura nezvayo ari akanaka magungwa muHuelva, jecha nzvimbo dzinopa dzakasiyana siyana dzinoyevedza kune vashanyi.
Vejer de la Frontera iguta rakanaka rine dzimba dzakacheneswa uye migwagwa yakatetepa. Asi zvakare ine yakanaka nharaunda nharaunda.
Runako uye kudanana kweCádiz zvakagadzirwa munzvimbo imwechete: Medina Sidonia, nzvimbo yekuenda iri pakati pe ...
Potes (Cantabria) iguta rakanaka munharaunda yeLiebana ine zvivakwa zvinoverengeka uye inoshamisa nharaunda nharaunda.
Chiclana nderimwe remaguta akanaka kwazvo emahombekombe muCádiz, ini ndichakuudza mune ino posvo ayo ari iwo mahombekombe akanakisa.
Toledo nderimwe remaguta akanaka kwazvo uye akachengetedzwa ekuMiddle Ages muEurope. Inotumidzwa zita 'guta re ...
Isu tinokuudza iwe kuti ndeapi makuru mapoinzi ekufarira muguta reGalician reOurense.
Inowanikwa munzvimbo yakavharika mumanagari weCampillo de Dueñas, mudunhu reGuadalajara, padombo hombe ...
Barcelona haina kungofarirwa chete nezvayo zvakanaka zvemazuva ano zvivakwa zvemabhiza, mahombekombe ayo akasununguka uye yayo huru tsika kupa ...
Madrid ine yakakura gastronomic kupihwa.Iko kwekudya muMadrid? Mune ino posvo ini ndinogovana newe 9 inokurudzirwa maresitorendi muguta.
Barcelona, ​​nzvimbo yekuzvarwa yevakuru vakuru, ndiro guta rakanakirwa kunakidzwa neakanakisa gastronomy mune yakanakisa kambani. Wakatotanga…
Mugardos iri pamahombekombe echikepe cheFerrol. Naizvozvo ine runako runoshamisa rwepanyama uye inodziya yegungwa mamiriro.
Maresitoreti anodziya uye epedyo muMadrid
MuMadrid mune nzvimbo dzakasiyana siyana dzekudyira kwaunogona kudya zvakanyatsonaka asi sarudza imwe chete yadzo ...
Ribadavia, mupurovhinzi yeOrense, inzvimbo Inoshamisa-Yehunyanzvi Complex uye zvakare guta guru renharaunda yakanaka yeRibeiro.
Isu tinokuudza iwe izvo zvaunofanira kuziva nezve Cathedral yeGirona, iro basa rinosanganisa masitaira uye rinotaura nyaya huru.
Chii chaungaona muLogroño
Kana iwe uchida kuziva zvekuona muLogroño, isu tinokuudza kuti zvivakwa uye nzvimbo dzegirinhi zvinowedzera hupenyu hunogarisana nevamwe uye chikafu chinonaka.
Chii chekuona muHuelva
Dunhu reHuelva inzvimbo yatinogona kunakidzwa yakawanda yevaraidzo nenzvimbo dzekuona. Inozivikanwa yayo ...
Chii chekuona muIbiza
Ibiza chitsuwa chiri chevaBalearic Islands uye pasina mubvunzo ndechimwe chevakakurumbira. Pfungwa ...
Chii chekuona muPamplona
Guta guru rehumambo hwekare hweNavarre, mavambo ePamplona anodzokera kuzana ramakore rekutanga BC apo maRoma akatanga ...
Salobreña nderimwe remaguta anoyevedza kuCosta Tropical deGranada zvese zvivakwa zvaro uye nemahombekombe ayo akanaka.
Manresa anokuratidza inoshamisa Gothic, Baroque uye Yemazuva ano monumental nhaka, asi zvakare yakasarudzika yakasikwa nharaunda.
Seguta guru reSpain, Madrid yakakosha nzvimbo yevashanyi uye yebhizinesi nzvimbo inogamuchira mamirioni avanhu panguva ye ...
Bocairent inokupa iwe inoshamisa medieval yekare taundi, akawanda uye akasarudzika mamaki uye hunoshamisa hunhu.
Lucena inozivikanwa seParera reSepharad nekuda kwayo yechiHebheru chekare, asi zvakare inokupa iwe zvinonakidza zviyeuchidzo kubva kune dzimwe nguva.
Poo kumahombekombe, muAsturias, iri mukati meiyo yakachengetedzwa nzvimbo yeEast Coast, kiromita ishoma ...
Roda de Isábena iguta raunotenda kuti wakadzokera kuMiddle Ages kana iwe uchifamba nemumigwagwa yaro yakatetepa uye ine cobbled.
Iyo Spanish mhenderekedzo yakakura kwazvo, zviuru zvisere zvemakiromita eakakura lithological kusiana kwakapa kumuka kune imwe ye ...
Chii chekuona muNavarra
Inowanikwa kuchamhembe kweSpain, Navarra inharaunda izere nemataundi anonakidza uye hupfumi hukuru hwe ...
Montgat, pamhenderekedzo yeBarcelona yeEl Maresme, iguta rine mahombekombe akanaka, zvivakwa uye yakanakisa gastronomy.
Mijas nderimwe remaguta akanaka kwazvo paMalaga Costa del Sol. Uye zvakare, inokupa iwe uri maviri mahombekombe uye nzira dzekufamba musango.
Chii chekuona muBilbao
Tinokuudza zvese zvinoonekwa uye kuitwa muguta reBilbao, kuchamhembe kweSpain.
Iyo yakasarudzika yenzvimbo yayo, padyo nevanhu vayo uye yayo inonakidza tsika nhaka inoita kanzuru yeCudillero ...
Calatañazor, mudunhu reSoria, inokutendera kuti udzokere kuMiddle Ages uye unakirwe nenzvimbo dzinoshamisa dzezvisikwa senge maSabinares.
Chii chekuona muLeón
Isu tinokuudza zvese zvinogona kuonekwa mune nhoroondo yeguta reLeón munharaunda yeCastilla y León.
Iri zhizha vanhu vazhinji vakasarudza nzvimbo mukati meSpain kunakidzwa nezororo rakakodzera. Vazhinji vanga vari ...
Mota del Cuervo, muLa Mancha Cuenca, inokupa zvakapoteredzwa senge zviroto uye inofadza kwazvo nhaka.
Chii chaungaona muna Gran Canaria
Gran Canaria ndicho chitsuwa chine huwandu hwakanyanya hwevanhu hweCanary Islands, ichigamuchira mamirioni e ...
Torrijos iguta diki mudunhu reToledo iro rinokupa iro rakapfuma rakakura nhaka uye chikafu chinonaka.
Arenas de San Pedro inokupa yakasarudzika nharaunda nharaunda, yakafuma monumental nhaka uye yakanakisa gastronomy.
Makiromita mashoma kubva kuGungwa reMediterranean uye pazasi pePasiki Park, Frigiliana inomuka, iro chete guta ...
Castro Urdiales iguta rakanaka kwazvo rinokupawo mabhishi akanaka uye nharaunda pamwe neakanyanya gastronomy.
Santo Domingo de la Calzada iguta rakanyarara muLa Rioja (Spain) iri pamahombekombe erwizi Oja ine ...
Burgo de Osma idhorobha rakanaka mudunhu reSoria iro rine rakanakisa rakakura nhaka uye chikafu chinonaka.
Barbastro iguta diki rizere nhoroondo uye zviyeuchidzo izvo zvakare zvinopa zvinoyevedza nharaunda uye zvinonaka chikafu.
Chii chaungaone muAvilés, Asturias
Isu tinokuudza zvese zvinoonekwa muAsturian guta reAvilés, guta rine guta rekare rakanaka uye rakakura gastronomy.
Aranda de Duero inyika yewaini, asiwo nhoroondo. Izvi zvinoshandura kuita yakapfuma monumental nhaka uye yakanakisa gastronomy.
Festivals of national tourist kufarira
Mhemberero dzakakurumbira chikamu chetsika uye tsika dzevanhu vakasiyana vanoumba dunhu kana ...
Zvekare zveguta rino kuCosta del Azahar zvinotitaurira nezvevaIberia, maCarthaginians, maRoma, maTempars nemapapa vakatarisana ...
Kana iwe ukashamisika zvekuita muSoria, isu tinokuudza kuti ine yakasarudzika nhoroondo-yehunyanzvi nhaka uye inonaka chikafu.
Chii chekuona muHuesca
Sezvo naTeruel, dunhu reAragonese reHuesca ndechimwe chezvinhu zvikuru zvisingazivikanwe muSpain. Ndinoziva…
Kwatinofanira kudya muTeruel
Kufamba chiitiko chendangariro, zvakare kwekuravira. Zvinoreva kusangana nezvakanakisa zve ...
Chii chaungaona muVitoria Gasteiz
Kana iwe uchinetseka kuti chii chekuona muVitoria Gasteiz, isu tinokuudza kuti iro guta reBasque rine zviyeuchidzo zvakawanda kubva panguva dzese uye nzvimbo zhinji dzegirini.
Kwatinofanira kudya muHuesca
Nzvimbo dzakanakisa dzekudya muHuesca inharaunda yeSan Lorenzo naCoso Alto, izvo zvinoumba izvo zvinozivikanwa seEl Tubo.
Nzvimbo dzekushanyira kuSpain
Spain ndiyo nyika yechitatu mupasi rose muzvivakwa zvinonzi World Heritage neUnesco kuitira kuti ne ...
Iyo Triana bhiriji ndechimwe chezviratidzo zvekufananidzira zveSeville. Iine anopfuura makore zana emakore enhoroondo, inobatanidza guta nenharaunda yezita rimwe chete.
Yakakomberedzwa nemasikirwo munzvimbo isina kana mataundi, Cala Salada iri, imwe yemakona akanakisa uye anonyanya kushanyirwa ...
Chii chekuona muJaca
Kana iwe wakambo shamisika kuti chii chekuona muJaca, isu tinokuudza kuti guta reAragonese rakapfuma nenhaka huru uye rine nharaunda dzakanaka dzePyrenean
Chii chaungaone muTeruel
Pamatunhu matatu anoumba Aragon, Teruel ingangove isingazivikanwe zvakanyanya. Kunyangwe iri imwe ye ...
Inowanikwa pasi petsoka dzeSierras de Tejeda, Almijara neAlhama Natural Park ndiyo maseru eAlhama de ...
Mabhati eArabhu eGranada
Kugeza muviri kwakanaka kunozorodza, kwemuviri uye nemweya. Tsika zhinji dzinozvinzwisisa nenzira iyoyo, kunyangwe paive ...
La Concha pamhenderekedzo
Chiratidziro cheSan Sebastián uye kudada kwevavakidzani vayo, La Concha pamhenderekedzo iri munzvimbo yezita rimwe chete ...
Isu tinokuudza zvese zvaunofanirwa kuziva nezve kushanyira Khedhedral yeMurcia, chivakwa chakakosha kwazvo chechitendero.
Toledo (Castilla-La Mancha, Spain) inozivikanwa nenhoroondo yayo yakanaka-yehunyanzvi nhaka, yemigwagwa yayo yepakati nepakati uye nekuve ...
Menorca iparadhiso yezvikonzero zvakawanda: maoves ayo akanaka uye mahombekombe, misha yaro inofadza, kunyura kwayo kwezuva, ayo ...
Chii chekuona muMasca, Tenerife
Isu tinokuudza iwe izvo zvinoonekwa mutaundi diki reMasca muTenerife, nzvimbo ine yakanaka nzira yekukwira.
Zvokuona muPuerto de la Cruz, Tenerife
Tinokuratidza zvese zvinoonekwa muguta rePuerto de la Cruz pachitsuwa cheTenerife.
Enda kune Alhambra muGranada
Tinokupa iwe matipi akareruka ekushanyira Alhambra iri muguta reGranada, iine rakaomarara rakakura.
Ciudad Rodrigo ane zvese zvinoita kuti iwe udanane ne: yakafara nzvimbo yakaoma, inoshamisa maseru enzvimbo uye inoshamisa yegastronomy.
Dhorobha reMaderuelo inhoroondo-yehunyanzvi Complex nekuda kwayo yakapfuma medieval nhaka. Asi, kana izvi zvakakodzera kuona, kunyanya zvakatipoteredza.
12 zvinhu zvekuita muPalencia
Uri kuenda kunoshanyira Palencia? Tsvaga gumi nemaviri ekuronga kuita nenzvimbo dzinowanzoitika muguta rePalencia dzausingakwanise kupotsa Unovaziva vese here?
Chii chaungaona muCalpe, Alicante
Isu tinokuudza izvo zvinoonekwa mutaundi reCalpe, muAlicante, nzvimbo inoshanya kwazvo ine matongo ekuchera matongo.
Chii chaungaona muPalencia?
Isu tinopinda muPalencia, mune iri runyararo guta, kuti iwe ugone kutarisa kune akanakisa marongero nenzvimbo dzekushanyira.
Pedyo neBarcelona, ​​guta reCaldes de Montbui rinozivikanwa nemvura inopisa. Asi zvakare inokupa iwe mamaki uye akapfuma gastronomy.
Isu tinokuudza izvo zvinoonekwa mutaundi rePlaya Blanca muLanzarote, inzvimbo inoshanya kwazvo iri padyo nenzvimbo dzekufarira.
Shanyira San Pedro Alcántara
Spain ine nzvimbo zhinji dzevashanyi dzinogona kunge dzisina kufarirwa nevashanyi vekunze. Zvakanaka, yave nguva yeku ...
Imwe yematunhu asingazivikanwe eSpain kune vafambi ingangove Teruel. Inowanikwa kumabvazuva kwenyika mune ...
Maguta eGranada, pakati pegungwa nemakomo
Maguta eGranada haanyanyo kuzivikanwa kupfuura iro guta guru redunhu. Asi, kana iwe ukavashanyira, iwe uchaziva nzvimbo dzakanaka.
Brihuega Lavender Minda
Kwenguva yakareba, iyo lavender minda yeProvence yanga iri yakakosha nzvimbo yekushanya kune vanoda ...
Mapaki emvura eSpain
Chimwe chezvirongwa izvo vana nevakuru vanonakidzwa kwazvo kana mazuva ekutanga anopisa ezhizha achisvika ...
Guta guru reSpain rine zvakawanda zvakaita sekune nharaunda. Mumwe nemumwe wavo anoratidza chakasiyana kumeso kweMadrid ...
Tsvaga izvo zviripo zvekuona muSanta María del Naranco, iro basa rinove rinonyanya kukosha muAsturian pre-Romanesque art.
Spain ine nzvimbo dzakanaka zhinji uye mamwe haasi iwo basa rechisiko asi remunhu uye nekuita kwake ...
Tinokuratidza nzvimbo dzese dzekufarira dzinogona kuonekwa muguta reOviedo, ine yakakosha nhoroondo nhoroondo uye pre-Romanesque machechi.
Zvakadii nekuziva Tenerife nhasi? Isu tinotanga vhiki neakakura pane manomwe manomwe eCanary Islands, yakanaka ...
Chii chekuona muSoria
Inowanikwa muCastilla y León, tinogona kutsanangura Soria sedhorobha diki rinochengeta rakawanda rerunako ...
Chii chekuona muGijon
Tinokuratidza zvese zvinoonekwa muguta reGijon riri kuchamhembe kweSpain, guta rine gungwa, chiteshi uye yakawanda nhaka.
Warner Park muMadrid
Yakavhurwa muna Chikumi 2002, Parque Warner Madrid ndiyo imwe yemapaki anokosha muSpain pamwe ne ...
Chii chekuona muValencia nevana
Valencia ndeimwe yenzvimbo huru dzevashanyi muSpain sezvo ichiunza pamwe zvese izvo chero mushanyi angatarisira kubva ...
Makuru maguta muSpain
Madrid neBarcelona ndiwo maguta makuru muSpain uye makuru asi haasi iwo ega. Kukura…
Sekureva kwemuparidzi ane mukurumbira wevashanyi, Lonely Planet, Seville yakazivikanwa seguta rakanakisa pasirese iro ...
Chii chekuona muSegovia nezuva rimwe
Tinokuudza zvese zvinoonekwa muguta reSegovia nezuva rimwe chete, zviine zviyeuchidzo zvisingaite uye mugero waro wakakurumbira.
Parque de la Ciudadela deBarcelona yaive, kwemakore mazhinji, iyo yega ruzhinji paki mutaundi. Yakavakwa…
Calahorra, iro guta guru reRioja Baja, inokosheswa nzvimbo yekudyira uye inoshamisa. Icho chimwe che ...
Nzira dzevashanyi dzakatenderedza Madrid
Kunze kwekuve guta guru reSpain, Madrid iguta rakavhurika, rine vanhu vazhinji uye rine hupenyu rine vanhu vazhinji ...
Chii chaungaona muSan Antonio, Ibiza
Isu tinokuudza zvese zvinoonekwa mutaundi reSan Antonio muIbiza, nzvimbo yevashanyi yakakomberedzwa nemabhichi nemataundi akanaka.
Alcazar weSan Juan
Alcázar de San Juan idunhu diki asi rakanakisa riri muCiudad Real. Iyo ine nhoroondo yakakura uye dzakasiyana ...
Teide National Park ndiyo hombe yeCanary Islands. Iyo yose paki ipfuma inoshamisa ye geological, ...
Iyo Madrid tambo mota
Kana iwe ukaenda kunofamba uchienda kuguta guru reSpain uye uchida kuona kufamba kwakanaka munzvimbo dzakakwirira uye dzakanaka ...
Wepamusoro gumi zvinhu zvekuita muMadrid
Madrid iguta rizere nemikana, inopa dzakasiyana siyana tsika nemitambo yekuzorora. Yakanakira…
Iyo Wax Museum, muMadrid
Kana iwe usingade mamamuseum ekare asi pane zvisingawanzoitika, zvepakutanga, zvakasarudzika, saka parwendo rwako rwunotevera rweMadrid usa ...
Kufamba ndega kuSpain
Kana uchitarisana nerwendo rwega, musanganiswa wemitsipa uye manzwiro anogona kusimuka pamberi pechisingazivikanwe, ...
Spain ine anopfuura makiromita mazana manomwe nemazana mapfumbamwe emhenderekedzo yegungwa. Mamiriro ekunze akanaka emunyika nenzvimbo dzakasiyana siyana ...
Chii chekuona muSeville mumazuva maviri
Seville, iro guta rakadii! Iyo ndeimwe yemaguta akanaka kwazvo uye akashanyirwa muSpain, ine huwandu hwakasimba hwevanhu uye ...
Molina de Aragón nderimwe remaguta ekare ekumadhorobha eGuadalajara (Spain). Inowanikwa kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kwedunhu, ...
Muzivi María Zambrano aigara achitaura kuti "kuSegovia mwenje hauburuke kubva kudenga, asi ...
Kunakidzwa muJameos del Agua
Lanzarote Island, imwe yevanonyanya kugara muCanary Islands, iri Biosphere Reserve saka hunhu hwayo ...
Shanyira Cabo de Palos
Cape inzvimbo yenyika inonanga kugungwa uye inokanganisa mafungu uye ...
Chii chekuona muValencia
Valencia ndiro guta rechitatu pakukura muSpain uye imwe yenzvimbo huru dzevashanyi munyika, kwete chete ...
Garachico, njodzi uye kushanya
Tenerife ndeimwe yeCanary Islands, yakakura uye ine vanhu vazhinji kwazvo. Pano, nezve ...
Las Rozas Village, kutengesa kwepamusoro pedyo neMadrid
Nyika yanhasi inotenderedza kushandiswa, chimwe chinhu chisina chinhu, chisingaperi, icho chakafemerwa kakawanda pagore ne ...
Chii chekuona muCantabria
Cantabria ndeimwe yenzvimbo dzakakosha muSpain nekuti inosanganisa makomo, gungwa, gastronomy uye tsika. Inzvimbo…
Jerez de los Caballeros nderimwe remaguta ekupedzisira eSpanish mudunhu reBadajoz usati wayambuka iyo ...
Cercedilla, kuenda pedyo neMadrid
Hausi kure neMadrid ndiro guta reCercedilla, nzvimbo yakave yakakurumbira nekuda kwekushanya
Chii chekuona muBarcelona mumazuva matatu
Barcelona nderimwe remaguta aya ausingakwanise kurasikirwa chero parwendo rwekuMediterranean, parwendo ...
Yemitambo yeRoma yeMerida
Kumadokero kweSpain kune Merida, guta guru reExtremadura, iro rakavambwa nemaRoma mu ...
Archaeological Museum yeMadrid
Inowanikwa mudunhu reSalamanca reMadrid, ndiyo imwe yemuseum inokosha muSpain padhuze neMuseum ...
Imwe yenzvimbo dzakanakisa dzeCatalan geography ndiyo Delta del Ebro Natural Park iri mu ...
Zvokuona mutaundi reLlívia muGerona
Tinokuudza zvese zvinoonekwa uye kuitwa mutaundi reLlívia riri muGerona, rakakomberedzwa nenharaunda yeFrance.
Iri panzvimbo yepamusoro pechikomo pakagara musha wekare weGasteiz uyo ...
Isla Mágica, theme park muSeville
Tsvaga zvinonakidza zvinokwezva zveSeville's Isla Mágica yemadhorobha theme paki, nzvimbo izere nemufaro uye zviitiko.
Ndeipi zvirinani kushanyira Barcelona
Barcelona nderimwe remaguta eEurope anonyanya kushanyirwa, aine vangangoita mamirioni mapfumbamwe vafambi pagore, nekuda kwerunako ...
Iyo Archena Spa
Tiri kuswedera pedyo nezhizha uye vazhinji vedu vanoronga zororo. Tinogona kuenda kunze kwenyika kana gore rino rinofanirwa ...
Kuenda kuchamhembe kwakadziva kumadokero kwedunhu reCáceres, padhuze neCuacos de Yuste, Monastery yeYuste iri ...
Chimwe chezviyeuchidzo zvikuru zveguta guru reSpain ndiPuerta de Alcalá. Zita rake harisi ...
Sagrada Familia muBarcelona ndiyo tembere yeKaturike inozivikanwa kwazvo pakati pevashanyi vanogara muBarcelona ...
Isu tinokuudza iwe zvese zvese zvaunoda kuti uzive nezve Cathedral yeLeón nechiratidzo cheGothic chimiro pane yayo facade.
Peratallada, chii chekuona
Tsvaga izvo zvatingaone muPeratallada, guta diki rekare rine runako rukuru ruri munzvimbo yeBajo Ampurdán.
Chueca ndiyo imwe yenzvimbo dzinozivikanwa kwazvo muMadrid. Nemweya wepasi rose, unowana zita rayo kune ...
Ndeipi zvirinani kuenda kuMallorca?
Ndeipi zvirinani kuenda kuMallorca? Kana iwe usina chokwadi kuti ndeipi nguva yakakurudzirwa, pinda mukati utore matipi edu kuti uve nerwendo rusingakanganwike.
San Miguel Musika muMadrid
Tinokuratidza zvese izvo iyo Mercado de San Miguel inogona kukupa iwe mumoyo weMadrid, yemhando yepamusoro gastronomic nzvimbo.
Kushanyira Royal Palace yeMadrid
Guta rakafanana neMadrid rine nzvimbo zhinji dzekushanyira kana iwe uri mushanyi. Zvitoro, mapaki, nharaunda, mamiziyamu uyezve, dzimba dzehumambo….
Yakaziviswa Nzvimbo Yemagariro Enyika, pamwe neiyo Chaiyo Alcázar uye Archivo deIndias, iyo Cathedral yeSeville ndiyo ...
Isu tinokuudza zvese zvakadzama zveiyo inozivikanwa Shongwe yeHercules, yekufananidzira mwenje weguta reA Coruña pamahombekombe eGalicia.
Makiromita makumi mashanu chete kubva kuMadrid, iri mukati memwoyo weSierra de Guadarrama pane chikomo ...
Chii chekuona muSegovia
Isu tinokuudza iwe nzvimbo dzekufarira dzaunofanira kuona muguta reSegovia, kubva pamugero waro kusvika kune yakanaka Alcázar kana nzvimbo dzeguta rekare.
Madrid ndiro guta guru reSpain, iro guta hombe munyika uye yechipiri muEuropean Union ine ...
Chii chaungaona muEl Retiro Park
Tinokuratidza nzvimbo huru dzekufarira dzinogona kuonekwa mune inozivikanwa El Retiro Park mumoyo weMadrid.
Gore rakapera Oceanogràfic yeGuta reZviviso neSainzi zveValencia vakapemberera makore gumi nemashanu kubvira ...
Iwo Mapako eAltamira, Sistine chapel ye prehistoric art
Kuwanikwa kwemapako eAltamira pakupera kwezana ramakore rechiXNUMX kwaireva shanduko muzivo yaive ...
Imwe yemapaki akanakisa muMadrid uye zvakare isingazivikanwe iEl Capricho Park. Zviri nezve…
Pakati peiyo Clamores ne Eresma nzizi, Alcázar de Segovia inokwira padombo, chivakwa chepakati nepakati chine mavambo ...
Isu tinokuratidza izvo iyo Timanfaya National Park muLanzarote yakaita, paki ine volcanic mavambo evakuru vashanyi uye geological kufarira.
Burgos Cathedral, runako rwegothic
Ndakagara ndichifarira machechi eGothic pamusoro pemamwe masitaera ekuvaka, uye kana zvikaitika kwauri ...
Maitiro ekushanyira Parc Güell
Nhaka yazvino uno yaAntonio Gaudí muBarcelona iri kungonakidza: Casa Batlló, Sagrada Familia, Casa Milà… Pasina…
Iyo Tembere yeDhibhodhi muMadrid
MuParque de la Montaña de Madrid pane imwe yeanodiwa zvikuru pfuma yeguta guru ...
Kushanyira kuCastillo de San Marcos
Spain izere nenhare uye nhasi ticha tarisa pane yakanaka kwazvo iri muCádiz, mu ...
Mazuva ese zviuru zvevanhu zvinotora metro yeMadrid kuti itenderere kuguta guru reSpain. Its about…
Iyo Shongwe yeCollserola
Kune dzakawanda shongwe munyika idzo dzinozadzisa mabasa ekutaurirana. Iwe unofanirwa kushamwaridzana nenyika mushure me ...
Isu tinokuudza iwe izvo zvaunoda kuziva nezve inoshamisa Patio de los Leones iyo iri muAlhambra muGranada.
Isu tinotaura nezve zviyeuchidzo zvikuru zvausingafanire kupotsa pakushanya kuMadrid, nenzvimbo dzinofarira vafambi.
Iyo Castle yeMonjuïc iri pagomo reMontjuïc muBarcelona uye ndeimwe yekushanya kwakakosha muguta.
Vateveri veSki vakambotsika muLa Molina, nzvimbo yemitambo iri muCerdanya, dunhu ...
Castillo de Colomares, imba yazvino kwazvo
Europe izere nenhare dzemarudzi ese uye mazera, uye muSpain pane chaizvo zvakawanda zvekusarudza kubva. Asi nhasi hatina chivakwa chepakati nepakati kana mu Kana iwe uchifarira zvinhu zvisinganzwisisike kana iwe uchida kitsch, tora kufamba uchikomberedza Malaga uye uzive iyo Castillo de Colomares, nzvimbo inopenga.
Kana isu tichifunga nezveIbiza, chinhu chekutanga chinouya mupfungwa chitsuwa chizere nemadhisko, nzvimbo dzekudyira uye makoji
MuBarcelona tinowana chikamu chakanaka chenhaka yaAntonio Gaudí, mumwe wevanonyanya kukosha veazvivakwa veazvino muSpain. Tinoziva ...
Bhururuka uchienda kuIbiza kwema 8 euros chete
Icho chipo chinobhururuka, uye hachina kumbotaurwa nani. Nekuti rwendo rwunoenda kuIbiza kwema8 euros, rwendo rwokudzoka, harusi kugara rwunoonekwa. Zvibate!
Chii chaungaona muSantiago de Compostela
Santiago de Compostela iri, pamwe neRoma neJerusarema, rimwe remaguta matsvene echiKristu. Kana muzana ...
Chitsuwa cheTenerife inzvimbo inoshanya kwazvo uye inopa zvese kubva kumahombekombe kusvika kunzvimbo dzakanaka dzenhoroondo, mawere kana mapako ekare.
Cala Turqueta, kona yakanaka muMenorca
Nzvimbo yakanaka yezhizha ndeyeBalearic Islands, inzvimbo inochengetedza yega nzvimbo yeSpain iri muGungwa reMediterranean uye guta rayo riri Palma. Mukati Iwe unoda here kunakidzwa nemahombekombe muzhizha rino? Tungamira kuMenorca uye upedze zuva racho muCala Turqueta: jecha jena, mvura yebhuruu, miti yemipaini, zuva ...
Misha yakanaka kwazvo muSierra de Huelva
MuSierra de Huelva mune mimwe misha yerunako rukuru, iyo zvakare ine nzvimbo zhinji dzezvakaitika dzinonakidza.
Santa Cruz nharaunda, muSeville
Zvakadii nezvekufamba kuburikidza nenzvimbo yeSanta Cruz, mumoyo weSeville? Dzimba dzekare, kereke huru, patio, zvikwere uye nzvimbo zhinji dzemapepa.
Chii chaungaone muAstorga, dunhu reLeón
Guta reLeonese reAstorga inzvimbo inopfuura yeCamino de Santiago asi zvakare iri nzvimbo yenhoroondo yekuwana.
Chii chaungaone muJerez de la Frontera, Andalusia
Guta reJerez de la Frontera rine nzvimbo yakanaka yezvakaitika kare uye zviyeuchidzo zvakawanda zvekuona kana uchishanyira nzvimbo dzayo dzinonakidza.
Hoces del Río Duraton yepaki yepaki muSegovia
Las Hoces del Río Duratón inoumba nzvimbo yakanaka iri mupaki yepanyama mudunhu reSegovia, yakanakira kufamba musango.
Tsvaga maguta akanaka kwazvo muSpain
Tsvaga mamwe emamwe maguta akanaka muSpain. Maguta anofanirwa kushanyirwa kamwe chete uye ayo anopa yakawanda nhoroondo uye varaidzo.
Svika pakuziva maguta akanaka kwazvo muAlicante
Tsvaga kuti ndeapi akanaka maguta muAlicante, anoyevedza mataundi ayo anopa enhoroondo zvivakwa nenzvimbo dzekufarira.
5 Zvakavanzika zveMadrid zvaunofanira kuziva
Seguta guru reSpain, Madrid iguta rine vanhu vazhinji rakazara nezvivakwa, maresitorendi, mashopu, mapaki, mamuseum. izvo zvinopa zvakawanda ...
Patios de Córdoba, Isingaonekwe Nhoroondo yeVanhu
Patios yeCórdoba atova Nzvimbo Yemagariro Enyika uye anogona kushanyirwa panguva yeFiesta de los Patios muguta, panguva iyo ivo vakashongedzwa nemaruva.
The Castañar del Tiemblo muCastilla y León
Tiri pakati pechirimo uye munhu wese anotanga kutsvaga nzvimbo dzekukwira, nzvimbo dzepanyama dze ...
Mawere akanakisa muSpain
Mhenderekedzo yeSpain ine mahombekombe ejecha rakanaka uye akadzikama mvura, asi zvakare ine mawere e ...
Los Gigantes mawere muTenerife
MaLos Gigantes mawere muTenerife ave imwe yenzvimbo dzayo dzinoshanya, sezvo vachipa chiitiko chakazara uye chinonakidza.
Chii chaungaona muNerja, guta revashanyi kumaodzanyemba
Tsvaga zvese zvaungaone mune inodziya Malaga taundi reNerja, inozivikanwa neBalcón de Europa nemapako ayo ekare.
Nzira kuburikidza neGothic Quarter yeBarcelona
Yakavakwa pane zvisaririra zveBarcino, mutungamiriri weRoma weBarcelona, ​​panguva yeMiddle Ages dzimba dzechiGothic dzakavakwa uye…
Almodóvar Castle, Mutambo weZigaro muSpain
Iwe unofarira Game yeZigaro? Zvakanaka, kuSpain unogona kushanyira iyo Castle yeAlmodóvar, muHighgarden akateedzana, imba yevaTyrells. Imwe yeakanakisa muSpain.
Chii chekuona muAlmería
Tsvaga zvese zvaungaone muAlmería, kubva kunzvimbo dzevashanyi dzeguta kusvika kune dzakakwirira mudunhu, senge rakakurumbira renje reTabernas.
Tsvaga zvese zvaungaona muguta reSeville, kubva kune inozivikanwa Giralda kuenda kukereke yayo kana iyo inonakidza Museum yeFlamenco Dance.
Iyo Zorrilla Chitima, imwe nzira yekuwana Valladolid
Pakati paFebruary 3 naNovember 24, 2018, Mugovera wega wega inotenderera pakati peMadrid neValladolid ...
Sephardic Museum yeToledo, rwendo rwunopinda mutsika dzechiSpanish dzechiJuda
Iri musinagogi rekare revaJudha reToledo uye inofungidzirwa kuti ndiyo sinagogi rakachengetedzwa kupfuura mamwe ose pasi pano, tinowana Sinagogi re ...
Ko kana tikasiya imba yekumaruwa?
Ko kana vhiki rino kana rinotevera zororo zambuko tichienda kuimba yekumaruwa? Kana usati uchiziva madhorobha ekumaruwa aya, wave kutora nguva!
Alhambra inovhurira veruzhinji muna Ndira makamuri aCarlos V
Pakupera kwa2016 Granada yakasarudzwa seguta rakanakisa muSpain mumakwikwi akarongwa mumanethiwo ...
Kufamba neSorolla House-Museum muMadrid
Yakakomberedzwa nebindu rinoyevedza uye iri mumuzinda wakanaka paGeneral Martínez Campos mugwagwa muMadrid, iri ...
Muchinyorwa chedu nhasi, tinokurudzira dzimwe nzvimbo dzakanaka kumaodzanyemba kweSpain: Andalusia. Kune gumi anokurudzirwa masaiti pakati pevamwe vazhinji.
5 madiki-anozivikanwa emamuseum ekushanyira kuMadrid
Madrid ine netiweki yemasisitimu-ane mamuseum umo iwe unogona kudzidza nezve nhoroondo ye ...
Gedhi reMapuraneti Manomwe eAlhambra richavhurwa veruzhinji munaNovember
Pakati pemwedzi waNovember uye zvakasarudzika, Alhambra iri muGranada ichavhura iyo Puerta de los ...
Zvinhu zvekuita muMallorca munguva yechando
Mallorca chitsuwa chezhizha, asi panguva yemwaka wakaderera inogona zvakare kuve nzvimbo yakanaka yekuwana zvivakwa zvacho zvikuru.
Mars Pasi Pano: Riotinto Mining Park
Muchinyorwa chedu nhasi tinoshanyira Mars pasi pano: Río Tinto Mining Park. Kana iwe uchida kuziva urwu rwizi rwakasiyana, enda kuHuelva.
León, Spanish Gita yeGastronomy 2018
León, Spanish Capital yeGastronomy 2018, anotsiva kune yaive gore rapfuura: Huelva. Ndezvipi zvigadzirwa zvinozivikanwa muLeón?
Mhemberero dzakakurumbira muSpain
Nenyaya yedu nhasi iwe uchazoda kufamba nenyika yedu. Tinokuunzirai mimwe mitambo inozivikanwa muSpain mumwedzi waGumiguru.
Kutarisa Juan Carlos I Park, mapapu eMadrid emazuva ano
Muna Chivabvu apfuura, Juan Carlos I Park akapemberera makore makumi maviri nemashanu sepapu huru yeMadrid yemazuva ano….
Alhambra muGranada inovhura Torre de la Pólvora kuruzhinji munaGunyana
Sezvo zvave zvichiita kubva gore rapfuura, Bhodhi reMatirastii reAlhambra neGeneralife yeGranada rinovhurira veruzhinji ...
Izvo zvakanakisa zvekushanya muSpain maererano neTripAdvisor
Tsvaga izvo gumi zvakanakisa zvekushanya muSpain zvinoenderana neTripAdvisor portal. Nzvimbo dzatinofanira kunyora pasi kuitira inotevera kununurwa.
5 inoronga kunakidzwa nezhizha muMadrid
Nyamavhuvhu anosvika uye vanhu veMadrid vanotsika chinowedzera mahedheni kuti vasiye guta guru kumashure. Iko hakuna kumahombekombe uye kare kare ...
Matipi ekugadzirira kuita iyo Camino de Santiago
Tinokupa mashoma mashoma matipi ekugadzirira kuita iyo Camino de Santiago mune mamwe ematanho ayo makuru.
Kubhadhara mota muBarcelona
Uri kutsvaga kubhadharisa mota muBarcelona? Tsvaga izvi uye nezvimwe zvekufambisa zvevoruzhinji muBarcelona kuti iwe ugone kusvika kwese.
Iwo mashanu akachena mahombekombe muSpain yekugeza
Aya ndiwo mahombekombe mashanu akachena kwazvo muSpain yekugeza. Ivo vari muAlicante neAndalusia. Wakamboshamba mune chero chazvo here?
Akanyanya kunaka masango emvura munyika medu
Muchikamu chino tinotora mamwe emadziva echisikigo munyika medu. Kana iwe uri wedziva rechisikigo kupfuura gungwa, gara uye verenga.
11 zvakakosha zvinhu kuti unakirwe neGranada
Tsvaga zvinhu gumi nezviviri zvakakosha kuti unakirwe neGranada, mazano ezvese zvido muguta reGranada nenzvimbo dzayo.
Zhizha muAlmería? Eheka! Kana iwe uine mamwe emahombekombe akanakisa muSpain! Kune makoves, mahombekombe akareba, mawere, misha nemaguta.
Chii chekuona nekuita muguta reMalaga
Guta reMalaga mubatanidzwa wakakwana wezvivakwa, mamiziyamu uye zororo nemahombekombe uye nemigwagwa yekutenga kwaunogona kushandisa zuva.
Torre de los Picos de la Alhambra ichavhurira veruzhinji muna Chikunguru chete
Munguva pfupi yadarika, Bhodhi reTrasti reAlhambra uye Generalife yeGranada iri kupa vanoda izvi ...
Sigüenza anokunda zita reGuta reRural Tourism mu2017
Sigüenza achangobva kuhwina zita rekufananidzira reGuta reRural Tourism mu2017 rakapihwa neiyo portal ...
5 madziva epanyama muSpain akakwana kutonhorera muzhizha
Zhizha harisati ratanga zviri pamutemo asi kupisa mune dzimwe nzvimbo dzeSpain kuri kutanga kuve ...
Madrid Book Fair 2017 yakavhura magonhi ayo
Rimwe gore rimwe Madrid Book Fair rinovhura madhoo ayo muPaseo de Cocheros del Parque del ...
Masango echisikigo padyo neMadrid
Aya ndiwo mamwe madziva echisikigo padhuze neMadrid ayo iwe aunogona kunakidzwa kubva muzhizha zvichienda mberi. Vamwe vakasununguka uye vamwe vane mutengo.
Neichi chipo, bhuku hotera muCórdoba uye ushanyire yakanaka
Neichi chikumbiro, bhuku hotera muCórdoba uye ushanyire yakanaka, pakati pezvimwe zvishamiso izvo guta zvinokuchengetera iwe, senge musikiti waro.
Alhambra ichavhura iyo Torre de la Cautiva kune veruzhinji chete mwedzi uno
Ndege dzakachipa kuenda kuPalma de Mallorca, kutenderera, neDreams
Ndege dzakachipa kuenda kuPalma de Mallorca, kutenderera, neEhope ... Ziva nezveMallorca kana usati watoita nechipo ichi chinoshamisa.
Mafambiro akanakisa kubva kuSeville
Kana iwe ukaenda kunofamba uchienda kuSeville, usakanganwa kuti uwane zvakapoteredzwa. Kune akawanda maguta ekushanyira mukati mekufamba chinhambwe! Córdoba, Cadiz, Jerez de la Frontera ...
Chii chatingaone nekuita muVigo?
Muchikamu chino tinokuunzira zvimwe zvinhu zvatinogona kuona nekuita muVigo mumavhiki anouya nemwedzi: makonzati, mafambiro, zviitiko, nezvimwe.
Casa Vicens yaGaudí ichavhurira veruzhinji muna 2017 kekutanga
Kudonha kunotevera, Casa Vicens muBarcelona ichavhura madhoo ayo kuruzhinji kekutanga mushure mekugara ...
6 Zvinhu zvekuita uye kuona muCádiz mahara zvachose
Muchinyorwa chanhasi tinokurudzira zvinhu zvitanhatu zvekuona nekuita muCádiz mahara zvachose. Verenga chinyorwa ichi uye tsvaga izvo "zvakabikwa" na 'Caí'.
Zvikonzero zvekufamba kuenda kuAndalusia uye kugara kuti urarame
Mune imwe yenyaya dzanhasi tinokupa dzakateedzana zvikonzero zvekufamba kuenda kuAndalusia uye kugara ikoko. Zvakakosha here?
Kufamba uchienda kuIbiza kubva kuMadrid kwemaanopfuura mana maeuro
Isu takawana ichi chikuru chinhu: Kufamba kuenda kuIbiza kubva kuMadrid kwemaanopfuura mana ma euros kuDreams. Tora mukana uyu!
Pfuma yeHispanic Society yeAmerica muPrado Museum
Kune nzira mbiri dzekuziva Spain uye neSpanish tsika. Chekutanga kuenda kunyika, kushanyira mataundi uye ...
Caravaca de la Cruz inopemberera gore reJubheri mugore ra2017
Caravaca de la Cruz iguta reSpain riri kuchamhembe kwakadziva kumadokero kwedunhu reMurcia. Vagari ne ...
Uri kutogadzirira zhizha 2017 here? Tevedza zuva uye nanga wakananga Almería: wakajeka musha weMojácar nemahombekombe ayo anoyevedza akamirira iwe ipapo.
Gaudí's Casa Botines ichavhura madhoo ayo muna Kubvumbi kekutanga
Basa remunyanzvi anoyevedza ano Antonio Gaudí rakabatana kwazvo neBarcelona. Saka kana uchitaura nezve izvi ...
Iyo Basilica yeAtocha uye iyo Pantheon yeVanoonekera Varume veMadrid
Pedyo nePaza de Carlos V muMadrid, inozivikanwa seAtocha, ndiyo Basilica yeMukadzi wedu ...
4 yakanaka maruva mitambo muSpain iyo inokatyamadza iwe
Nematsutso anouya mazuva ane zuva, kudziya uye kuputika kwehutano uye ruvara nekuda kwekutumbuka kwe ...
Kutarisa kuTabernas Desert kana kuSpanish Far West
Dunhu reTabernas muAlmería ndeimwe yeanoperevedza ezvisikwa izvo zvinokatyamadza mufambi anoshanya ...
Las Fallas inosvika kuValencia, wagadzirira here?
Kubva munaKurume 15 kusvika 19, Valencia ichanyudzwa muFallas, pati yayo huru. Chiratidziro chemoto ...
Kufamba uchitenderera Malasaña, iyo hipster nharaunda yeMadrid
Iyo tsika nemagariro shanduko iyo Madrid yakasangana nayo mukati me70s uye 80s ezana ramakore rechiXNUMX ...
Zvinhu zvinogona kukushamisa iwe kana uri mutorwa uye shanyira Spain
Muchinyorwa chanhasi isu tichakuudza zvishoma nezveSpain uye "zvisinganzwisisike" zvingakushamise iwe kana uri mutorwa uye utishanyire.
Plaza Meya weMadrid akavezwa kunze kwegore rayo mazana mana
Pane chiitiko cheyegumi nemakumi mana emakore ePaza Meya muMadrid, kanzuru yeguta reguta rakagadzirira iyo ...
3 tsika nemagariro ecotourism muSpain ye2017
Chero nguva yegore yakanakira kutiza, saka zvinokurudzirwa kugadzirira yedu ...
Nhare padunhu reAndalusia (II)
Chinyorwa chanhasi ndiko kuenderera kweiyo yapfuura pane dzimba dzenzvimbo nedunhu reAndalusia. Panguva ino tinokuunzira ina ina.
Nhare padunhu reAndalusia (I)
Chinyorwa chanhasi chakanakira avo vanoda nhoroondo uye nyika yema castles: Andalusia nenhare dzayo, imwe padunhu.
Tsvaga gumi nzvimbo muSpain kutiza chando chando, gumi dzakakura getaways kunzvimbo shoma kudziya uye padyo.
Idzo shanu dzinoshanyirwa nzvimbo dzevashanyi muMadrid muna 5
Madrid nderimwe remaguta eSpain anonakidza kushanyira sezvo iine nzvimbo dzinoverengeka dzekushanya kubva ipapo ...
5 yekuyeuchidza nzvimbo dzekushanyira kuSpain iyi 2017
Changoburitswa ichi 2017, inguva yekutanga kufunga nezve chii chichava getaways iyo isu tichaita ino gore. Gumi nerimwe kuruboshwe ...
Ndekupi isu isu veSpanish patinonyanya kufamba?
Idzi ndidzo dzimwe nhamba dzakaburitswa newebsite yeKayak, nezve kutsvaga kwakaitwa nevaSpanish mwaka. Wanga uchitarisira here?
Zvinhu zvekuona mudunhu rePontevedra (II)
Isu tinoramba tichitsvaga makona mudunhu rePontevedra, kubva kumahombekombe kweCabo Kumba kusvika kuNhare yeSoutomaior kana mapopoma eBarosa.
Zvinhu zvekuona mudunhu rePontevedra (I)
Tsvaga zvese zvinhu zvaunogona kuona munzvimbo yedunhu rePontevedra, kubva kumataundi madiki kusvika kumatongo uye zviyeuchidzo.
Iwo mashanu anonyanya kushanyirwa maguta eEurope
Isu tinokuudza kuti ndedzipi maguta mashanu akashanyirwa eEuropean muna 5. Pane imwe yeSpanish pakati pavo, unogona kufungidzira nderipi?
Kufamba kuenda kuTenerife, chii chekuona pachitsuwa
Tenerife chitsuwa chinogona kupa zvakawanda maringe nezvekushanya, kubva kumahombekombe kusvika kune zvisikwa zvekushanya uye nzvimbo dzinonakidza dzezororo.
Zvinhu zvekuita aya mazuva eKisimusi muBarcelona
Muchikamu chino tinokuudza zvimwe zvinhu zvekuita mazuva ano eKisimusi muBarcelona, ​​guta reBarcelona. Nakidzwa nemigwagwa yayo yakavhenekerwa.
Iyo nzira kuburikidza nematanho eMutambo weZigaro muSpain
Iyo terevhizheni nhepfenyuro, yakanyanya mufashoni munguva dzichangopfuura, ave akanakisa evashanyi kushambadzira ye ...
Zvinhu zvekuita muSantiago de Compostela
Pane zvinhu zvakawanda zvekuita muSantiago de Compostela, guta rizere nemakona anonakidza uye yakawanda nhoroondo, kubva kuCathedral yaro kusvika kuguta rekare.
Kushanyira World Heritage Sites kuSpain
Kushanyira World Heritage Sites kuSpain: takagara kumaodzanyemba muSeville, Córdoba neGranada uye pakati peSegovia neSalamanca.
Guta reGranada rinosarudzwa seyakanakisa muSpain
VaSpanish vanoda Granada. Izvi ndizvo zvinobviswa mukutarisa mhedzisiro inowanikwa mu ...
7 mazano ekunakidzwa neKisimusi muMadrid muna 2016
Hakuna kutonhora muMadrid, ikisimusi. Iyi ndiyo imwe yemashoko ekuti kanzuru yeguta reguta re ...
Maguta eSpain ane rakanakisa guta rekare
Isu tichakuudza nezve maguta akanaka kwazvo muSpain neguta rekare. Nenzvimbo dzematombo uye zviyeuchidzo zvinoshamisa zvekushanyira
Zvinhu zvekuitira mahara muMadrid
Tsvaga kuti ndezvipi zvinhu zvaunogona kuita zvemahara muMadrid. Kubva pakushanyira mamuseum akanyanya kukosha kusvika pakuona Royal Palace kana nzvimbo dzekutamba.
Kuwa kweValencia kwatova Nzvimbo Yemagariro Enyika
Mushure memakore maviri ekusimudzira kwakasimba mukutsigira kubvumwa kweLas Fallas kuve Inhu isingabatike ye ...
Kubva polvorón kusvika polvoron kuburikidza nemamwe maguta eSpain
Kana iwe uri mumwe wevaya vanonakidzwa kupedzisa ruzivo rwekudya kwako kweKisimusi, nhasi tinopa 100% gastronomic chinyorwa.
10 maguta eSpain ekushanyira munguva yechando (II)
Tsvaga mamwe maguta mashanu eSpanish atinokurudzira kushanyira munguva ino yechando, nekuti vese vane chimwe chinhu chinonakidza.
10 maguta eSpain ekushanyira munguva yechando (I)
Tsvaga dzimwe nzvimbo dzechando mumaguta eSpain, uye haufanire kuenda kure kuti unakirwe nekukwirwa kwakanaka.
4 gourmet misika yauchazoda kushanyira kuSpain
Iwo ekare misika yezvikafu yemaguta ave, nekufamba kwenguva, gastronomic nzvimbo uko ...
Kuenda kuAlbarracín neTeruel, yakachena Aragonese essence
Pamatunhu matatu anoumba Aragon, Teruel ingangove isingazivikanwe. Nekudaro, inovaka iyo iyo mune mazhinji ...
Kushanyira kuCastillo de los Guzmanes muNiebla, Huelva
Isu tinoshanyira Castillo de los Guzmanes muNiebla, Huelva, ingori maminetsi makumi maviri kubva kuguta. Imba yakachengetedzwa kwazvo uye inofanirwa-kuona.
Nzira yekupemberera Hispanic Heritage Zuva muMadrid?
Panoramic yePlaza Meya muMadrid Iyo Spanish National Mutambo ichaitika muna Gumiguru 12 kana, se ...
Iyo ramangwana reiyo España Chivakwa uye Plaza deEspaña muMadrid
Chimwe chezvivakwa zvekufananidzira zveguta guru renyika iri muPaza de España muMadrid ...
5 Gourmet misika muMadrid yezvikafu
Kwenguva yakati ikozvino, misika yemhando yepamusoro yakawedzera mumakuru makuru ematunhu ayo ave ...
Huelva, nhanho nhanho (II)
Kana maawa mashoma apfuura takakurudzira mashanu makuru emakona eHuelva, pano tinokuunzira mamwe mashanu. Iko kushanya kunosungirwa!
Huelva, nhanho nhanho (I)
Mune ino chinyorwa iwe unowana mashanu akakurudzirwa makona eHuelva. Huelva haizi mahombekombe chete, guta rayo rakanakisa.
Chii chekuona nekuziva muBarcelona, ​​iro guta reBarcelona
Muchikamu chino tichaenda kunzvimbo shanu nzvimbo dzaunofanirwa kushanyira kana uri kuenda kuBarcelona, ​​guta reBarcelona, ​​munguva pfupi.
Chii chekuona muCórdoba mumazuva mashoma
Tsvaga zvekuona muCórdoba kana uchizopedza mazuva mashoma muguta rino. Tora mukana wenguva yekuona inonakidza nzvimbo.
Kufamba kuenda kuTabernas Desert muAlmería kana kuSpanish Far West
Imwe yeakanyanya kuwanikwa eIberian Peninsula iTabernas Desert, iro gwenga rega muEurope. Inowanikwa ...
Spain, bhaisikopo rakaiswa
Iyo terevhizheni nhepfenyuro, yakanyanya mufashoni munguva dzichangopfuura, uye bhaisikopo rave iro rakashambadza rakanakisa ...
6 emashiripiti makona muGalicia
Tsvaga mashoma emakona emashiripiti muGalicia, nzvimbo inoramba ichikura mukushanya nekuda kwezvose zvainopa.
Kufamba kuburikidza neZafra, isingazivikanwe yeExtremadura
Zafra nderimwe remaguta anozivikanwa muExtremadura. Nzvimbo yaro kumaodzanyemba kweBadajoz (pakati pemakomo ...